Shir golaha wasiirada ee maanta oo looga hadlay arrimo aad xasaasi u ah (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shir golaha wasiirada ee maanta oo looga hadlay arrimo aad xasaasi u ah (AKHRISO)
Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta shirkoodii isbuuclaha ahaa ku yeeshay xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, waxayna kulankaasi uga doodeen xaaladda amniga guud ee dalka.
Shirkaasi ayaa waxaa shir gudoominayay ra’iisul wasaare ku-xigeenka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte, waxayna marka hore dhamaantood ka tacsiyeeyeen dadkii ku geeriyooday weerarkii ismiidiiminta ahaa ee dhawaan ka dhacay agagaarka xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Golaha wasiirada ayaa sidoo kale dhamaantood isku raacay in si gaar ah looga war-haayo caruurta ay dhaleen askartii ku geeriyootay weerarkaas, waxayna sidoo kale tilmaameen in taliyihii hore ee ciidankaasi Marxuum Bashiir Yaasiin loogu magac darro irida hore ee madaxtooyada Soomaaliya.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Maxamed Cumar Care ayaa ka codsaday dhamaan wasaaradaha shaqada kuleh inay soo diyaariyaan siyaasad hageysa wax u qabashada qoysaska askarta iyo shaqaalaha rayidka ah ee geeriyooday, iyagoo ka shaqeynaya danaha qaranka dalka.
Ugu dambeentii, wasaaradda gaashaandhiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa balan-qaaday inay kordhin doonto dagaalada lagu ciribtirayo argagixisada, si aysan ugu hir-gelin inay is hor-istaag ku sameeyaan doorashooyinka la qorsheeynayo inay dalka ka dhacaan dhamaadka sanadkaan 2016-ka.